Global Aawaj | हिउँमाथि बसेर परीक्षा ! (फाेटाेफिचर) हिउँमाथि बसेर परीक्षा ! (फाेटाेफिचर)
२२ पुष २०७८ 3:51 pm
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका-४ गापस्थित नुब्री आधारभुत विद्यालयले गत साता लिएकाे प्रथम त्रैमासिक परीक्षाकाे दृश्य । परीक्षा मिति तय भइसकेकाे भन्दै विद्यालयले हिउँमाथि नै राखेर परीक्षा लिएकाे थियो । चिसाेले कक्षाकाेठाभित्र परीक्षा लिन नसकेपछि बाहिर हिउँमाथि बेन्च कुर्सी राखेर परीक्षा लिइएकाे थियाे । तस्बिर :साैजन्य-गणेश ढकाल
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका-४ गापस्थित नुब्री आधारभुत विद्यालयले गत साता लिएकाे प्रथम त्रैमासिक परीक्षाकाे दृश्य । परीक्षा मिति तय भइसकेकाे भन्दै विद्यालयले हिउँमाथि नै राखेर परीक्षा लिएकाे थियो । चिसाेले कक्षाकाेठाभित्र परीक्षा लिन नसकेपछि बाहिर हिउँमाथि बेन्च कुर्सी राखेर परीक्षा लिइएकाे थियाे । तस्बिर: साैजन्य-गणेश ढकाल